Ikhaya > I-Palmitoylethanolamide (PEA)
Ukuba ujonge umgangatho ophezulu I-Palmitoylethanolamide (PEA) umgubo uyathengiswa, emva koko ukwindawo elungileyo. Singomnye wabenzi bePalmitoylethanolamide (PEA) abadumileyo, abanolwazi nabanamava eChina. Sinikezela ngeemveliso ezinyulu nezipakishwe kakuhle ezihlala zivavanywa lilabhoratri yomntu wesithathu ekumgangatho wehlabathi ukuqinisekisa ubunyulu nokhuseleko. Sisoloko sihambisa ii-odolo ngaphesheya kwe-US, i-Yurophu, i-Asiya kunye nezinye iindawo zehlabathi. Ke ukuba ufuna ukuthenga iPalmitoylethanolamide (IPAA) umgubo wodidi oluphezulu kunokwenzeka, nxibelelana nathi ku-cofttek.com.
Yintoni esetyenziselwa Palmitoylethanolamide?
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zepea?
Ngaba i-phenethylamine isemthethweni?
Uhlala ixesha elingakanani i-PEA?
Ngaba i-phenylethylamine iyasilela kuvavanyo lweziyobisi?
Ngaba ukongezwa kwePea kukhuselekile?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ii-Peas zingene?
Ngaba ungathenga i-phenylethylamine ezivenkileni?
Ithatha ixesha elingakanani ipea ukuba isebenze?
Ngaba ipea iyanceda ukulala?
Ngaba i-Pea iyakhuthaza?
I-phenylethylamine ihlala ixesha elingakanani kwinkqubo yakho?
Ngaba itshokholethi inephenylethylamine?
Ifumaneka phi phenylethylamine?
Ngaba i-phenylethylamine iphakamisa?
Uhlala ixesha elingakanani uHordenine kwinkqubo yakho?
Ngaba iPalmitoylethanolamide (PEA) ikhuselekile?
Ndingayifumana phi iPalmitoylethanolamide?
Yintoni i-ertyisi cream?
Kutheni sifuna iPalmitoylethanolamide (PEA)?
Yintoni i-PEA yefibromyalgia?
Yintoni ukukhululeka kwentlungu ye-neuropathic?
Ndingalala njani nentlungu ye-neuropathic?
Ngaba amanzi okusela ayanceda kwi-neuropathy?
Yintoni i-ertyisi ulwelo esetyenziselwa?
Yintoni unyango lwe-ertyisi?
Ngaba i-ertyisi iqhelekile kwizigulana ezinehypovolemia?
Zeziphi kwezi zinto zilandelayo ezinokubangela ukubuyela umva kwesingqisho sepea?
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yintsapho ye-endocannabinoid, iqela lama-acid amide. I-PEA iye yaqinisekiswa ukuba inomsebenzi we-analgesic kunye ne-anti-immune kwaye isetyenziswe kwizifundo ezininzi ezilawulwayo ezigxile kulawulo lweentlungu ezingapheliyo phakathi kwabaguli abadala abaneemeko ezahlukeneyo eziphantsi kwezonyango.
Kuthathwe ngeedosi ze 500mg-1.5g idosi nganye, rhoqo kwiiyure ezimbalwa, i-PEA ibonelela umsebenzisi ngemvakalelo yovuyo, amandla, ukhuthazo, kunye nokuba sentlalontle ngokubanzi. I-Esp xa idityaniswe ne-mao-b inhibitor, i-hordenine, i-PEA ithatha inqanaba elitsha lokugcoba kunye nolonwabo ngokubanzi.
Akukho ziphumo bezingalindelekanga ziyingxaki. I-PEA inokuthathwa kunye nayo nayiphi na enye into. Ikonyusa isiphumo sokunciphisa iintlungu kwii-analgesics zakudala kunye ne-anti-inflammatories. I-Palmitoylethanolamide inokusetyenziswa ngokudibeneyo nezinye izinto ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga.
I-Phenethylamine (i-PEA) yindawo ye-organic, i-monoamine alkaloid yendalo, kunye nokulandela umkhondo we-amine, esebenza njengenkqubo ye-nervous system evuselelayo ebantwini.
Xa uthathwa ngomlomo: Ukuthatha i-palmitoylethanolamide KUFANELEKILE UKHUSELEKILE kubantu abadala xa isetyenzisiwe ukuya kwiinyanga ezi-3. Iziphumo ebezingalindelekanga ezinokwenzeka, ezinje ngesisu esibuhlungu, zinqabile kakhulu. Akukho lwazi lwaneleyo lwanokuthenjwa lokwazi ukuba ngaba i-palmitoylethanolamide ikhuselekile ekusebenziseni ixesha elingaphezulu kweenyanga ezi-3.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-melatonin ayilawulwa ngokungqongqo yi-Food and Drug Administration (FDA). Kungenxa yokuba i-melatonin ayithathwa njengechiza. Ke ngoko, inokuthengiswa njengesongezelelo sokutya njengeivithamini kunye neeminerals, ezingagadwanga ngokusondeleyo yi-FDA.
I-PEA yinto yendalo eveliswa ngumzimba; iyasebenza kakhulu kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa njengesongezelelo seentlungu kunye nokudumba.
I-ertyisi zithatha iintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-30 ukuze zihlume. I-ertyisi ziya kuhluma ngokukhawuleza ukuba amaqondo obushushu omhlaba angama-65-70 degrees Fahrenheit. Ungayikhawulezisa inkqubo yokuhluma ngokucoca ii-ertyisi iiyure ezingama-24 ukuya kwezingama-48 ngaphambi kokutyala. Ewe kunjalo, zikho ezinye izinto ezichaphazela indlela ii-ertyisi eziza kukhula ngokukhawuleza kwaye zikhule ngayo.
Ezi zongezelelo xa zigqityiwe zincedisa ekwandiseni inqanaba lomsebenzi wobuchopho kunye nokunciphisa uxinzelelo. Iyafumaneka ekhawuntarini, kwaye enye ayifuni mayeza ukuyithenga. I-phenylthylamine ikwasetyenziselwa ukuphucula ukugxila kunye noxinzelelo.
Senze le shedyuli yonyango emva kokunyanga amakhulu ezigulana zentlungu ye-neuropathic. Ngokusekwe kumava ethu eklinikhi, sicinga ukuba ukuqala ngohlobo oluncinci lwe-PEA ubuncinci iintsuku ezili-10 kunokunceda ukufikelela kwinqanaba lokunyanga elifanelekileyo le-PEA.
Uhlobo lwamafutha olufunyenwe ngokwendalo emzimbeni lunokuba sisitshixo sokulala ubusuku obuhle. Abaphandi banethemba lokuba imolekyuli eyaziwa ngokuba yi-PEA- okanye i-palmitoylethanolamide- ayinakunceda kuphela ngokulala kodwa ikwalwa nentlungu kunye nokunciphisa ukudumba.
Ingathathwa kunye namanye amayeza eentlungu okanye iyodwa, njengoko kucetyiswa yingcali yakho yokhathalelo lwempilo, ukuxhasa ukukhululeka kwentlungu. I-PEA inokunceda ekunciphiseni ukuxhomekeka kumayeza eentlungu aqatha abangela iziphumo ebezingalindelekanga ezingafunekiyo. Esona sibonelelo siphezulu sinokuthatha ukuya kwiinyanga ezi-3 kodwa iziphumo zibonwa rhoqo kwiiveki ezi-4-6.
Iitshokholethi inoxinzelelo oluphezulu kuko nakuphi na ukutya kwe-phenylethylamine, eyikhemikhali eveliswa kwingqondo xa umntu esemathandweni. Kodwa indima ye "chocolate amphetamine" iyaphikiswa. Uninzi ukuba ayizizo zonke i-phenylethylamine ye-chocolate eyenziwe ngemetabolism ngaphambi kokuba ifike kwi-CNS.
Kwizilwanyana ezanyisayo, i-phenethylamine iveliswa kwi-amino acid L-phenylalanine yi-enzyme enuka kamnandi i-L-amino acid decarboxylase ngokusebenzisa i-enzymatic decarboxylation. Ukongeza kubukho bayo kwizilwanyana ezanyisayo, i-phenethylamine ifumaneka kwezinye izinto eziphilayo kunye nokutya, okufana netshokholethi, ngakumbi emva kokuvundiswa kweentsholongwane.
Ithathiwe kumthamo we-500mg-1.5g ngedosi, rhoqo kwiiyure ezimbalwa, i-PEA ibonelela umsebenzisi ngemvakalelo yovuyo, amandla, ukhuthazo, kunye nokuba sempilweni ngokupheleleyo. I-Esp xa idityaniswe ne-mao-b inhibitor, i-hordenine, i-PEA ithatha inqanaba elitsha lokugcoba kunye nolonwabo ngokubanzi.
Kwirhasi, amanqanaba e-hordenine afikelela ubuninzi kwisithuba seentsuku ezi-5 ukuya kwezi-11 zokuhluma, emva koko anciphe kancinci de kusele umkhondo emva kwenyanga enye. Ngapha koko, i-hordenine ibekwe ngokukodwa kwiingcambu.
Nangona iPalmitoylethanolamide inyamezelwe kakuhle ngumzimba, kwimeko yokuba abantu baphawule naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga, bacetyiswa ukuba banciphise inani lomthamo ukuya kuma-400 mg ngosuku.
Okubaluleke ngakumbi, icomputer akufuneki ithathwe ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Ukusetyenziswa okuzinzileyo kwe-PEA kunokukhokelela kwimicimbi yesisu. Nangona kunjalo, sisiphumo esecaleni esingafane sabonwa. Okubaluleke ngakumbi, i-PEA akufuneki isetyenziswe kulusu kwaye ukhulelwe kwaye abafazi abancancisayo kufuneka bangahlali kude nokusetyenziswa kwayo kuba akukho uphando olwaneleyo okanye ubungqina bokuqinisekisa ukuba iyeza likhuselekile kula maqela. Ngokufanayo, ukuba unesifo kuyo nayiphi na imeko, kusoloko kungcono ukubonana nodokotela ngaphambi kokuthatha isongezelelo esifana nePalmitoylethanolamide.
Impendulo Cofttek. I-Cofttek sisongezo somvelisi wempahla ekrwada eyaqala ukubakho ngo-2008. Le nkampani iyazingca kakhulu ngeqela labaphumeleleyo abane-R & D elisebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuba izinto ezingafunekiyo ezinikwa abaxhasi zikumgangatho ophezulu kakhulu. Okubaluleke ngakumbi kukuba inkampani ityala imali kakhulu kubuchwephetsha kunye novavanyo lokuhlalutya. Zonke iimveliso ezithengiswa yinkampani zenziwe ngobuninzi bazo, umzi mveliso wobugcisa obuphezulu ozigwagwisa ngeenkqubo zabathengisi abaqolileyo kunye nezixhobo zobugcisa zamva nje. Kukuzibophelela okwenziwe yinkampani ukuvelisa izinto ezisemgangathweni ezikrwada ezenze ukuba iCofttek ibe ligama elaziwa kakuhle kwimarike yempahla eluhlaza. Namhlanje, inabaxhasi kwihlabathi liphela.
IPAA khrimu yokhrimu equlathe uxinzelelo olufanelekileyo lwendalo kunye nezinto zokukhusela i-palmitoylethanolamide (PEA). I-cream ye-PEA ke inokusetyenziselwa njengesongezelelo esifanelekileyo sokusebenza kweephilisi emzimbeni.
I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yimolekyuli enamafutha eveliswa ngesixa esincinci nomzimba, ubukhulu becala ekuphenduleni ukonakala kwethishu okanye ukulimala kwethishu okanye kwezihlunu. I-PEA iveliswa ngokwemvelo ngumzimba womzimba ekuphenduleni intlungu okanye ukuvuvukala. I-Palmitoylethanolamide, ekwabizwa ngokuba yi-PEA yi-lipid eyenzeka ngokwendalo ewela phantsi kweqela lamafutha e-acid. Nangona le ngxube iveliswa ngamajoni omzimba, ikwakhona nakwizilwanyana nakwizityalo kwaye ke, inokufumaneka kwimithombo yangaphandle, enje ngeqanda leqanda, isoya lecithin, ialfalfa, ubisi, amandongomane kunye neembotyi zesoya. I-PEA inezixhobo ezinamandla okunciphisa iintlungu kwaye ke, iyakwazi ukuphembelela imisebenzi emininzi yomzimba emzimbeni.
I-PEA ithathwa ikakhulu kwiinjongo zokulwa nokudumba kunye nokunciphisa iintlungu. Ke, isebenza njani i-PEA kanye ngaphakathi komzimba? Nje ukuba ungene ngaphakathi emzimbeni, i-PEA iyazibophelela kwindawo ekujolise kuyo ecima umsebenzi wokuvutha kweseli emva kwenkqubo yokubopha. Okubaluleke ngakumbi, olunye uphando lubonisa ukuba isiphumo se-analgesic se-PEA sinokubakho kumandla ekhompawundi ukuphazamisa ukusebenza kweeseli ezikhethekileyo zomzimba ezijongene nokudlulisa imiqondiso yeentlungu. Nokuba yeyiphi na indlela ngqo, into inye iqinisekile ukuba i-PEA ibonelela ngesiqabu kwintlungu ye-neuropathic kunye nokuvuvukala.
Kwiminyaka embalwa edluleyo, I-Palmitoylethanolamide (PEA) ndibone ukuqubuka kwequbuliso kudumo lwayo. Nangona iimpawu zonyango ze-PEA zafunyanwa emva phaya ngo-1950s kwaye ukusukela ngoko, izazinzulu kunye nabaphandi bayiphonononge kakhulu le ndawo, kwiminyaka embalwa edlulileyo, umdla we-PEA ukhulile. Oku ikakhulu kubangelwa yindima yokukhusela neyokuphilisa enokuthi idlaleyitha ngaphakathi emzimbeni kunye nokukwazi kwayo ukusingatha iintlobo ezahlukeneyo zosulelo kunye ne-neuropathic.
Nangona kunjalo, umzimba womntu uvelisa i-PEA ngesixa esincinci kwaye amaxesha ngamaxesha kunoko, eli nani alonelanga ukunqanda ukudumba kunye nentlungu kwaye ngenxa yoko, abantu bahlala becetyiswa ukuba bathathe izongezo ze-PEA. Ukunciphisa iintlungu kunye nokudumba yenye yezona zibonelelo zininzi ze-PEA.
Njengento eyenzeka ngokwendalo ye-PEA isongezelelo zihlelwa e-Australia, nakwamanye amazwe amaninzi, njengemveliso yokutya, hayi iziyobisi. I-PEA ibonakalisiwe inezinto ezichasayo, ezinokuthintela ukunganyanzeleki, iipropathi zokulwa i-anticonvulsant kunye ne-neuroprotective kwaye isetyenziswa ngakumbi kunyango lweentlungu ezingapheliyo.
Unyango lwe-Neuropathic Pain Treatment I-Anticonvulsant kunye ne-anti-depressant drug zihlala zililayini lokuqala lonyango. Ezinye izifundo zentlungu ye-neuropathic zibonisa ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezingekho-steroidal ezichasayo (i-NSAIDs), ezifana neAleve okanye iMotrin, kunokunciphisa intlungu. Abanye abantu banokufuna i-painkiller eyomeleleyo.
Ukulala ngamadolo akho kuphakanyisiwe kunokunciphisa iimpawu zakho ezibuhlungu ngokunciphisa uxinzelelo kwii-lumbar discs zakho kwindawo yeengcambu zakho. Lala ngomqolo-gcina izithende zakho kunye neempundu unxibelelana nebhedi kwaye ugobe amadolo kancinci usiya eluphahleni.
Iindlela zokuCoca ubuNhlungu beNyango. Gcina phezulu kweswekile. Ukuba unesifo seswekile, gcina iswekile esegazini iphantsi kolawulo. Yicime. Ukuzilolonga kukhupha iintlungu zentlungu ekuthiwa zii-endorphins. Hlanganisa iinyawo zakho. Ukuba iinyawo zichaphazeleka yintlungu yentlungu, lixesha lokuba ugxile kukhathalelo lweenyawo ezilungileyo.
Ayisiyiyo kuphela amanzi afudumeleyo apholileyo, kodwa anokukhuthaza nokujikeleza emzimbeni wakho. UVinik uthi: “Inokukunceda kwangoko. Kodwa ngenxa yokuba isifo seswekile sinokubangela ukulahleka kwemvakalelo, qiniseka ukuba amanzi akashushu kakhulu ngaphambi kokuba ungene.
Ayinakusetyenziswa ngabafazi abakhulelweyo. I-Palmitoylethanolamide inokukunceda ekujonganeni nokuvuvukala kunye nentlungu engapheliyo. Kufuneka kuthathwe kuphela phantsi kolawulo lwezonyango.
I-Palmitoylethanolamide yikhemikhali eyenziwe ngamanqatha. Ifunyanwa ngokwendalo ekutyeni okunje ngezikhupha zamaqanda kunye namandongomane, nasemzimbeni womntu. Isetyenziswa njengeyeza.
I-Epinephrine kufuneka ilawulwe kwiidosi ze-1-mg nge-intravenously / intraosseously (IV / IO) yonke imizuzu ye-3-5 ngexesha lokubanjwa kombane okungafunekiyo (PEA). Iidosi eziphezulu ze-epinephrine ziye zafundwa kwaye azibonisi phuculo ekusindeni okanye kwiziphumo ze-neurologic kwizigulana ezininzi.
Kwimbonakalo ye-PEA etiologies, i-pseudo-PEA ihlala ibangelwa yi-hypovolemia, i-tachydysrhythmias, ukwehla kwesivumelwano sentliziyo, okanye ukuthintela ukujikeleza, okunje nge-pulmonary embolism, tamponade, kunye noxinzelelo lwe-pneumothorax.
I-Hypovolemia kunye ne-hypoxia zezona zizathu zixhaphakileyo ze-PEA. Ziyeyona nto ibuyela umva ngokulula kwaye kufuneka ibe phezulu nakuphi na ukwahluka okuchongiweyo. Ukuba umntu unembuyekezo yokuhamba okuzenzekelayo (ROSC), qhubela phambili ukhathalelo lwasemva kokubanjwa kwentliziyo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ukuthandwa kwePalmitoylethanolamide kuye kwangqina ukunyuka okukhulu, ikakhulu ngenxa yokuba abantu baye bazi ngakumbi ukusetyenziswa kwayo okuninzi. Kule mihla, abantu basebenzisa iPalmitoylethanolamide ikakhulu ngenxa yesiphumo sayo sokuthomalalisa iintlungu, kodwa ikwasoloko ichazwa kwizigulo ezinzulu, ezinjengesifo sikaLou Gehrig, isifo seswekile seswekile, isifo sokuqina kwemithambo, i-fibromyalgia, i-carpal tunnel syndrome, i-glaucoma, i-autism, i-eczema, i-endometriosis kunye ezahlukeneyo zokuphazamiseka. Kule mihla, izongezo zePalmitoylethanolamide (PEA) ziyasetyenziswa ngabantu ukukhuthaza ukunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, uphando oluthe kratya kufuneka lwenziwe kule ndawo.
① Uphando lwakwangoko lubonisa iziphumo ezithembisayo kunyango lwezifo zikaLou Gehrig
Isifo sikaLou Gehrig okanye i-Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) sisifo esisongela ubomi esikhokelela ekonakaleni kweemoto-neuron kwaye ekugqibeleni siqhubeke nokukhubazeka. Uphando lwakwangoko lubonisa ukuba i-palmitoylethanolamide xa ithathwa nge-riluzole, inokunceda ukuphucula le meko. I-PEA yi-endocannabinoid ephucula ukusebenza kwepulmonary kwizigulana ze-ALS.
② Inceda ngeCarpal Tunnel Syndrome
ICarpal Tunnel Syndrome yimeko echaphazela isandla. Abantu abanale meko bahlangabezana nokudinwa kunye nokubamba ngesandla. Imeko ichaphazela isandla sonke, kubandakanya yonke iminwe ngaphandle komnwe omncinci. Isifundo sika-2017 siveze ukuba i-PEA ingasetyenziselwa ngempumelelo ukunyanga ii-syndromes ezinoburharha, kubandakanya iCarpal Tunnel Syndrome. Ke, izongezelelo ze-PEA zinokuthathwa ukuba ziphantsi kolawulo lweentlungu kunye nokungalunganga okubangelwa yi-Carpal Tunnel Syndrome.
③ Iyasebenza ngokuchasene ne-Neuropathy yeswekile kunye ne-Fibromyalgia
Isifo seswekile esibangelwa sisifo seswekile ngumonakalo wemithambo-luvo. Olunye lweempawu eziqhelekileyo zesifo seswekile, kukuqaqanjelwa yimilenze neenyawo. I-Fibromyalgia, kwelinye icala, yimeko echaphazela inkqubo ye-musculoskeletal. Kunye nokukhathala kunye nemicimbi yememori, olona phawu luqhelekileyo lwe-fibromyalgia yintlungu kuyo yonke inkqubo ye-musculoskeletal.
Zombini i-neuropathy yesifo seswekile kunye ne-fibromyalgia ziimeko ezibuhlungu ezingezoqhelekileyo. Ngethamsanqa, iintlungu ezihambelana nazo zombini ezi meko zinokulawulwa ngokusetyenziswa kwe-Palmitoylethanolamide.
④ Inokusetyenziselwa ukunyanga iimpawu zeSifo esiPhindaphindiweyo
I-Multiple Sclerosis yimeko apho amajoni omzimba aqala ukuhlasela i-myelin egubungela i-nerve, yona ikhokelela ekunciphiseni okanye kungabikho nxibelelwano phakathi kwengqondo kunye nomzimba wonke. Esi sifo sinokuphazamisa ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, uphando lwangaphambili lubonisa ukuba i-PEA, xa inikwe ngokudibeneyo ne-interferon-beta1a, inokunceda ukunciphisa iimpawu ezinxulumene ne-Multiple Sclerosis.
⑤ Iyasebenza ngokuchasene ne-Glaucoma kunye ne-temporomandibular Disways
I-Glaucoma ngumbandela ochaphazela i-opic nerve kwaye ungunobangela ophambili wobumfama kubantu abaneminyaka engama-60 nangaphezulu. Ukuphazamiseka kwe-TMJ, kwelinye icala, kubangela iintlungu zomhlathi. Uphando lubonisa ukuba i-Palmitoylethanolamide okanye i-PEA inokusetyenziswa ukunyanga iintlungu ezibangelwa zizo zombini ezi meko.
⑥ Ezinye iiNzuzo
Ngaphandle kokusebenzisa okukhankanywe apha ngasentla, i-PEA iyacetyiswa kwakhona kwintlungu ye-nerve kunye ne-analgesic yonyango lwasemva kokuhlinzwa. Ngamanye amaxesha, ikwasetyenziselwa ukunyanga ezinye iimeko, ezifana nentloko, uxinzelelo lwe-eczema, i-endometriosis, i-autism, isifo sezintso kunye neentlungu ze-vulvar. I-PeA ikwabonakalise ukusebenza ngokuchaseneyo nokufumana isisindo. Nangona kunjalo, uphando olungaphezulu luyafuneka kwezi ndawo.
Kule minyaka idlulileyo, izifundo ezahlukeneyo zisebenzise idosi eyahlukeneyo kwaye ngenxa yoko, akukho dosi inokuthathwa ifezekile. Nangona kunjalo, abantu bayacetyiswa ukuba bagcine i-Palmitoylethanolamide (PEA) yokuthatha idosi ngaphantsi kwe-300-1,200 mg ngosuku. Abo bathatha izongezo zePalmitoylethanolamide bayacetyiswa ukuba bathathe i-350-400 mg kathathu ngemini kwaye ubude beedosi abufanele ukuba ngaphezulu kweenyanga ezi-2 zizonke.
(1) UGabriella Contarini, uDavid Franceschini, uLaura Facci, uMassimo Barbierato, uPietro Giusti kunye noMorena Zusso (2019) 'I-co-ultra micronised palmitoylethanolamide / luteolin edityanisiweyo inciphisa amanqaku ezonyango kunye nokumakisha kwesifo esichaphazelekayo kwimodeli yegundane yovavanyo lwe-encephalomyelitis ye-autoimmune', Ijenali yokuvuvukala,
(2) UMaria Beatrice Passavanti, uAniello Alfieri, uMaria Caterina Pace, uVincenzo Pota, uPasquale Sansone, uGiacomo Piccinno, uManlio Barbarisi, uCaterina Aurilio kunye noMarco Fiore (2019) 'Izicelo zonyango ze-palmitoylethanolamide kulawulo lweentlungu: umgaqo-nkqubo wovavanyo lokujonga kwakhona', Ubungakanani boVavanyo lweNkqubo,
(3) U-Eleonora Palma, uJorge Mauricio Reyes-Ruiz, uGeorge Lopergolo, uCristina Roseti, uCristina Bertollini, uGabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, uEmanuela Onesti, uCristina Limatola, uRicardo Miledi, uMaurizio Inghillerid (2016) 'Ii-Acetylcholine receptors ezivela kwimisipha yomntu njengeethagethi zekhemesti kunyango lwe-ALS', IProc Natl Acad Science US A.,
(4) UDi Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'IPalmitoylethanolamide sisiXhobo esiGuqula isiGulo kwiPheripheral Neuropathy: Uncedo lweNtlungu kunye neNeuroprotection Yabelana nge-PPAR-Alpha-Mediated Mechanism', Abalamli.
(5) IPALMITOYLETHANOLAMIDE (PEA) (544-31-0)
(6) UHAMBO LOKUHLOLA I-EGT
(7) I-OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) -I-WAND YOMGICI YOBOMI BAKHO
(8) I-Anandamide VS CBD: Yeyiphi eyona ilunge ngakumbi kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo!
(9) Yonke into ekufuneka uyazi ngeNicotinamide Riboside Chloride
(10) Isongezelelo seMagnesium L-Threonate: Izibonelelo, iDosage, kunye neziphumo zeSide
(11) Izibonelelo ezi-6 eziPhezulu zeZibonelelo zeReveratrol Supplements
(12) Izibonelelo ezi-5 eziPhezulu zokuthatha i-Phosphatidylserine (PS)
(13) IziBonelelo ezi-5 eziPhezulu zokuthatha i-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ)
(14) Olona hlobo luNgcono lweNootropic lweAlpha GPC
(15) Eyona Nyango yokuLuphala nokuGuga yeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
bardzo bolą mnie stawy i mięśnie, mam tez słabą odporność czy przyjmowanie PEA pomoże mi. Choruje również na nerwicę lękową czy ukuba nie będzie kolidować z psychotropami.
Ndikhuselekile kwinja yam enesifo esinganyangekiyo seLymes?
Indawo entle onayo apha kodwa bendifuna ukwazi ukuba uyazazi na iiforam zasekuhlaleni ezigubungela izihloko ezifanayo ezithethwayo apha? Ndingathanda ngokwenene ukuba yinxalenye yoluntu apho ndinokufumana iingcebiso kwabanye abantu abanamava abanomdla ofanayo. Ukuba unazo naziphi na iingcebiso, nceda undazise. Usikelelke!
Ndithathe i-PEA (kunye neCoQ10) ukusukela ehlotyeni. Ekuqaleni, andinakukunyamezela ngenxa yemicimbi yamathumbu. Ngoku inkungu yam yengqondo kunye nentloko sele ihambile, nto leyo emangalisa kakhulu xa ndicinga ukuba ndinayo yonke imihla.
Ndithatha i-PEA. Isebenza ngokungathanga ngqo kwii-receptors ze-cannabinoid. Inesiphumo esongeziweyo xa ithathwa kunye nee-cannabinoids ezinjenge-CBD. Ihlala ithathwa nge-1,200mg / ngosuku kodwa ndithatha i-400mg kuphela ngenxa yokuba ndikwidosi ephezulu ye-CBD (200mg / ngosuku).
I-PEA ngokwendalo ivela emzimbeni, hayi umlutha, awunakufumana kunyamezelana kwaye kuye kwangqinwa ukuba kuyasebenza kwintlungu kunye nokudumba kwizifundo ukusukela ngeminyaka yoo-1950.
Umyeni wam uyayithatha kwaye ucinga ukuba intle.
Ndingathanda ukubulela ngeenzame enizibekileyo ekubhaleni le website. Ndinethemba lokujonga umxholo ofanayo womgangatho ophezulu ovela kuwe kamva kwakhona. Ngapha koko, ubuchule bakho bokubhala bundikhuthaze ukuba ndifumane eyam, indawo yobuqu ngoku;)
Ngenxa yokuba umngcipheko omkhulu we-COVID-19 ubonakala ngathi sisiqhwithi se-cytokine apho ukudumba kubangela umonakalo omkhulu ngaphambi kokuba amajoni omzimba wethu enze i-antibodies ezaneleyo zokulwa intsholongwane kubonakala ngathi kukhuseleka okukhuselekileyo okunceda ukunciphisa inani lama-cytokines indlela elungileyo yokuvumela amajoni omzimba ixesha lokulwa nesi sifo.
Gcina oku kuhamba kakuhle, umsebenzi omkhulu!
Kum iyanceda ngokudumba. Uncedo olukhulu lokulala, yiba nokozela okusisiqingatha sedosi.
Ezi zinto zibonakala zithembisa
Ugqirha wam wezifo zomzimba wancoma iPalmitoylethanolamide. Ndithathe uMirica PEA iinyanga ezi-3. Kunzima ukuqiniseka. Iimpawu zam ziphucule kakhulu, kodwa ixesha elininzi sele lidlulile. Ndiyekile nje ukuyithatha kwaye andiqapheli umehluko omkhulu kwindlela endiziva ngayo. Khange ndibeneziphumo ebezingalindelekanga ngelixa ndiyithatha, ubuncinci ibingabonakali buhlungu.
Uninzi lwezinto zilungile kwisisu esingenanto, ngaphandle kokuba zixhaswa kakhulu zibonisa ukufunxeka okuphuculweyo kwaye kungekuphela kokunyibilika kwamafutha, ngaphandle kokuba zibangela imiba yesisu (zinc)
Ndingayithatha isisu esingenanto kwaye sele ndenze amaxesha amaninzi.
Welp ndathatha umngcipheko kunye noku-odola ezinye namhlanje. Ukudinwa kwentlungu esiswini ngethemba lokuba iyasebenza.
I-Palmitoylethanolamide yindawo enamafutha e-acid engapheliyo. Oko kuthetha ukuba kumzimba wakho ngoku.
Abanye abantu benza nje okuncinci kuyo, kwaye amanqanaba akho awela njengoko usiba mdala. Ke ukuncedisa kunokunceda ukubuyisa loo manqanaba. Kukwafumaneka nakukutya, nako. Kukhuselekile kakhulu. Uninzi lwabantu aluyiqondi into eyiyo, kwaye luyiphose inqaku ngokupheleleyo.
Ukuba ungumntu onamanqanaba amahle endalo e-PEA emzimbeni wakho, ngekhe uve nto. Nangona kunjalo, abantu abanamanqanaba asezantsi ngokwemvelo baziva iimpembelelo ngamandla. Kungenxa yoko le nto ubona umbono opolisayo kuyo.
Ngentlungu endisandula ukuyifumana i-PEA ebendiyithatha kwi-1200mg mihla le kwaye kubonakala ngathi iyanceda
Umama wangena kwi-rheumatologist yakhe ngenye imini, kwaye waxelelwa ukuba ii-biomarkers zakhe zokukrala zilungile, okokuqala ngqa! Andikhumbuli ngokuchanekileyo- kwaye ndiqinisekile ukuba umama akenzi-- babesebenzisa eliphi inqanaba, kodwa wandixelela uluhlu olupheleleyo lwale biomarker yokukrala ngokupheleleyo yayiphakathi kwe-0-30, kwaye uhlala engaphezulu 60. Ngeli xesha, wayeneminyaka eli-15.
Ndihlala ndichitha isiqingatha seyure ukufunda eli phepha lewebhu ngalo lonke ixesha kunye nekomityi yekofu.
I-Palmitoylethanolamide ilungele ukudumba kunye nentlungu. I-Oleamide ilungele ukulala. Zombini zilungile kumajoni omzimba. Sikhethe i-PEA kuKhuselo loMzimba ukuze singabangeli ukozela.
Ndikwanemigraines ngandlela thile, ngesiqhelo amaxesha e-1-2 ngenyanga kunye nePalmitoylethanolamide yimimangaliso yam ngelixa ndinemigraine.
Bendithatha i-PEA ngomgubo. Ndiyifumene ndenza inkqubela encinci kwintlungu ngaphezulu kwazo zonke ezinye izinto endizithathayo.
Kulungile enye ngu (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine enye (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide. Abantu baphambanisa iPhenylethylamine nePhenylalanine ngalo lonke ixesha, kunye neCytisine neCysteine. Ngamanye amaxesha iikhompawundi zemichiza zipelwa ngokusondele kakhulu, kwaye ngamanye amaxesha zinesifinyezo esifanayo. Andikwazi ukuthi ndiyayithanda, kodwa iPalmitoyalethanolamide ngumlomo. Ke ukuyifinyeza kulula kakhulu.
Ndiyithathile ngenxa yeentlungu zesinyi (isizathu esingaziwayo) kwaye yasebenza kakhulu. Ikwasona sithako siphambili kunyango lwenja yam (kunyango) kwaye kubonakala ngathi iyanceda.
Akukho ziphumo bezingalindelekanga kuthi. Khange lubuchaphazele ubuthongo bam. Owu! Kodwa ikwasusa idolo elibuhlungu, eyayiyibhonasi engalindelekanga.
I-PEA indinceda ukuba ndiqonde ukuba ndinamanqanaba asezantsi eentlungu, kwaye intle xa incipha okwethutyana.
Ndikhe ndaneengxaki zentlungu engapheliyo kangangeminyaka elishumi. I-PEA iyenza imodareyithe, kwaye xa intlungu yam iqhelekile kukucaphukisa okuqhelekileyo, i-PEA ibonakala yenza umzimba wam wonke uzive ukhululekile.
I-Palmitoylethanolamide yindawo enamafutha e-acid engapheliyo. Oko kuthetha ukuba kumzimba wakho ngoku. Abanye abantu benza nje okuncinci kuyo, kwaye amanqanaba akho awela njengoko usiba mdala. Ke ukongezwa kunokunceda ukubuyisa loo manqanaba. Kukwafumaneka nakukutya, nako. Kukhuselekile kakhulu. Uninzi lwabantu aluyiqondi into eyiyo, kwaye luyiphose inqaku ngokupheleleyo. Ukuba ungumntu onamanqanaba amahle endalo e-PEA emzimbeni wakho, ngekhe uve nto. Nangona kunjalo, abantu abanamanqanaba asezantsi ngokwemvelo baziva iimpembelelo ngamandla. Kungenxa yoko le nto ubona umbono opolisayo kuyo.
Ngoku malunga nombuzo wakho malunga ne-COX-2 ngokukodwa, yimodyuli ye-COX-2, hayi isithintelo sokukhuphisana. Iyabophelela kwii-endocannabinoid receptors GPR55 kunye ne-GPR119. Nantso indlela elawula ukubonakaliswa kwe-cyclooxygenase-2 (COX-2) kunye ne-nitric oxide synthase (iNOS) engafakwanga. Ikwayigonist ye-PPAR-α, elawula ukuthotywa kwe-IkB-alpha kunye ne-p65 NF-kappaB yokuhanjiswa kwenyukliya. Izixhobo zayo ze-PPAR-α ziyinyani yokunciphisa i-neuroinfigue. Ngaphezulu kokuzibophelela ngokuthe ngqo, kukhokelela ekonyukeni kokubopha kwe-anandamide ukuya kwi-CB1 kunye ne-CB2 receptors, eyona endocannabinoid yomzimba wakho. Yindawo epholileyo ngokwenene!
Ndifuna nje ukwenza iposti malunga nale nto ingaziwayo ethembisa kakhulu kwizigulana ezinganyangekiyo. I-Palmitoylethanolamide (i-PEA) yi-acid acid enamafutha eyenzeka ngokwendalo emzimbeni womntu nakwimizimba yezinye izilwanyana kunye nezityalo. Ugqirha wase-Italiya ogama linguRita Levi-Montalcini wafumanisa ukuba i-PEA inezinto ezichasayo nezidambisa iintlungu
Kwilingo elilawulwa kabini elingaboniyo, elilawulwa yi-placebo kunye nezigulana ezingama-636 zentlungu, inani elifunekayo ukunyanga (i-NNT) ukufikelela kwi-50% yokunciphisa iintlungu xa kuthelekiswa nesiseko yayingu-1.5 emva kweeveki ezintathu zonyango
I-PEA isaphandwa ngeendlela ezininzi zentlungu. Akukho ziphumo ebezingalindelekanga eziye zaqwalaselwa ngokokude nditsho.
Ukuphononongwa okuncinci ngokuxoxa ngokusetyenziswa kwePalmitoylethanolamide kunyango lweentlungu ezingapheliyo. Kukho izifundo ezimbalwa kuphela kuyo kwizigulana ze-IBS nakwiimodeli zezilwanyana ze-IBS. Ukunikezelwa kwendima yenkqubo ye-endocannabinoid kwinkqubo yesisu yinqaku elinomdla lokuqhubeka nokuphonononga indima ye-PEA kunye nee-receptors ezinxulumene noko kunyango lwentlungu.
Ikhuseleke kangakanani ipalmitoylethanolamide (PEA)?
Kutshanje ndiye nda-odola umgubo wePEA kwaye isanda kufika ngeposi namhlanje. Ndenza uphando olongezelelweyo malunga nokuba kukho nawuphi na umngcipheko nge-PEA kuba yi-COX2 inhibitor.
Ngaba kukhuselekile ukuba ndithathe i-PEA?
I-Palmitoylethanolamide iyiphilisile intlungu yam yommangaliso njengommangaliso!
Ndifuna ukuyikhupha le nto ngaphandle kokuba omnye umntu ayifumane iluncedo njengam. Ndinentlungu enganyamezelekiyo engaphaya kweminyaka engama-20. Ndiye eStanford, bendikho kuyo yonke into ukusuka eFentanyl ukuya kwi-morphine ukuya kwi-oxy kunye ne-benzos, ii-anti depressants, njl. Ezinye izinto zanceda kodwa akukho nto isebenzayo. Kwakubuhlungu mihla le xa ndibeka okanye ndihlala phantsi. Ngamanye amaxesha kwakunzima ukuhamba. Ingxaki yemithambo-luvo kumqolo wam osezantsi ukusuka kuqhaqho oludala oluchaphazela iimbilini zam. Ukulala yinto endifumana kuyo imizuzu engama-30 ngexesha kwaye yayihlala ihamba iintsuku ngaphandle kokufumana konke konke.
Kutshanje umntu endimaziyo uphakamisa ukuba ndizame into ebizwa ngokuba yi-PEA. Ndandinokholo olungathethekiyo oluya kusebenza. Kodwa yayibonakala ikhuselekile ngokwaneleyo. Ndiqale into ekhoyo eAmazon kwaye ifundwe iminyaka engama-60 kodwa ndingazange ndive ngayo. Ibizwa ngokuba yiPalmitoylethanolamide (PEA, ukuze ingabhidaniswa nePhenethylamine ekwasisifinyezo se-PEA) IPalmitoylethanolamide ifunyanwa ngokwendalo kwimizimba yethu nakwizidlo zethu. Yi "fatty acid amide" eneempembelelo ezinkulu kwinkqubo ye-endocannabinoid (kwaye inyusa i-anandamide, i-cannabinoid yethu engapheliyo).
Ndithatha i-120mg kabini ngemini. Ekuqaleni andizange ndibone nto. Ngapha koko, iveki yokuqala yayiyeyezona zinto zintle bendinazo ngexesha elithile. Kwiveki yesibini ndavuka ngenye intsasa ndiqonda ukuba ndilele ubusuku bonke. Intlungu yam ibiphelile. Ndifumanise ukuba yinto yesibetho. Ndakhala ngovuyo kungekho namnye. Kuvaliwe ngaphambili kwiintsuku ezimbalwa. Kulungile kube ngaphezulu kwenyanga kwaye akukho ntlungu. I-PEA yaziwa ngokusebenza njengokuchasana okuchasayo kunye nentlungu yomzimba. Olunye uvavanyo lwezonyango oluncinci yi-FDA luye lwabonisa ukuthembisa kwezi ndawo.
Kukho i-TON yamabango enziwe ngabantu ukuba i-PEA iya kunyanga zonke iintlobo zezinto. IDK ngayo yonke loo nto. Into endiyaziyo kukunceda kwintlungu yam ngaphezu kwayo nayiphi na into endakha ndayithatha. Ndiyekile kwiintlungu zam 100%. Ndaphuma kuwo onke amayeza am kwaye akukho zintlungu !!! Ingqondo yam yoogqirha yabethwa ngumoya kwaye uza kuyizama nezinye izigulana.
Ukuba uzama ukunika iiveki ezimbalwa ezilungileyo. Kufanelekile ukudubula. Ayaziwa ukuba inxibelelane nezinye ii-meds okanye inemida eyaziwayo yetyhefu kodwa njengayo nantoni na eqala kancinci. Iidosi ezingaphezulu kwe-300mg zinika intloko encinci.
Isebenza kuphela kwintlungu yam yovalo. Ndisaziva iintlungu eziqhelekileyo kunye neentlungu. Ngaphandle koko ndiziva ngcono. Ukuba unengxaki yesifo se-neripheral kufanelekile ukuba uyidubule.
I-Magnesium idume ngokubangela amaphupha aphambeneyo, i-5-HTP inxibelelana namaphupha nayo iirc.
Andikwazi ukuthatha i-magnesium ngaphantsi kwe-3h ngaphambi kokulala okanye kungenjalo ndiphupha kakhulu, andilali kakuhle.
Ndabona iPalmitoylethanolamide kutshanje kwaye ndiza kuyizama. Seku malunga neveki okanye oko ndiqala ukuyisebenzisa kwaye yandinceda kakhulu.
Indenza ndizive ndikhululeke kakhulu yinto ebendingayilindelanga.
I-Palmitoylethanolamide, Ukutya okuKhethekileyo kwiiNjongo zezoNyango, kuNyango lwentlungu engapheliyo: Uhlalutyo lweMeta yeDatha edibeneyo. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Ngokuxhomekeke, ngaba kukho umahluko kwindlela ezi zimbini ze-acid ezinamafutha ezichaphazela ngayo?
Zombini zibonakala zifana kakhulu kwi-moa, ungaqinisekanga ukuba kufanelekile ukuzama enye ngaphezulu kwenye. Eyona nto ibalulekileyo kukujonga ukungalingani komzimba, ibhonasi yokuphucula umgangatho wokulala.
Olu luluvo lwam
Ukungqinelana kwakungumgubo ocolekileyo, omhlophe. Ithathwe kancinci, yayingenancasa kwaye inyibilike kancinci, mhlawumbi ngenxa yokuba inganyibiliki amanzi.
Ndinamava amahle malunga neentsuku ezili-10 ukusukela oko ndaqala ukuyithatha.
Sele izinyanga ezimbalwa ngoku kwaye ndiyayithanda. Ndiziva ndibhetele kakhulu kwaye khange ndiqaphele naziphi na iimpembelelo.
Ndithatha i-600 mg kabini yonke imihla kwaye ngaphezulu kweveki kwaye iziphumo zibalasele.
Andinangxaki nge-magnesium kodwa i-5htp ngaphambi kokulala yandinika amaphupha amabi ngaphambili. Kwafuneka ndihambise i-5htp ukuya emva kwemini.
I-Palmitoylethanolamide indinika isiqabu kwiintlungu ze-fibromyalgia. Kwaye andisavuki ndiziva ngathi ndibethwe nge rebar ebuthongweni bam.